Fandraisana an-tsoratra - Infinity-Electronic
Ry mpampiasa rehetra, ianao dia mahazo ny faktiora ara-barotra ofisialy aorian'ny fividianana ny Infinity-Electronic.hk, vakio amim-pitandremana ny fampianarana etsy ambany.
1, Fametrahana ny faktiora navoaka
Ny famoahana dia homena avy amin'ny Infinity-Electronic.hk. Ny volan'ny vola dia hajaina amin'ny habetsahan'ny vola laninao.
Infinity-Electronic.hk dia manome karazana valisoa roa, faktioran'ny VAT (tsy misy fepetra) ary faktiora manokana manokana (Deductible).
Mba hanatsarana ny fahombiazan'ny fandaniana sy ny fialana amin'ny fiverenana, ny faktiora dia homena amin'ny 5 andro fiasana aorian'ny nahazoan'ny mpampiasa entana.
Azafady, fenoy ny adiresy marina, ny olona mifandray, ny nomeraon-telefaoninao mba hahazoana antoka fa azo omena ny faktiora. Raha tsy mameno ireo fampahalalana ireo ianao, dia handefa ny faktiora amin'ny adiresy mitovy amin'ny entana ny Infinity-Electronic.hk, mba hahafahantsika mifandray aminao amin'ny fotoana.
2, faktioran'ny VAT
Matetika ny Infinity-Electronic.hk dia mamoaka faktiora VAT ho an'ireo mpampiasa izay tsy mpandoa hetra.
Soraty ny anaran'ny orinasa sy ny vaovao momba ny hetra ao amin'ny faktiora azafady.
3, faktiora manokana VAT
Raha mila famoahana "faktiora manokana VAT" ianao, dia mifandraisa amin'ny kaontinay, raha tsy izany dia hamoaka faktiora VAT ny rafitra Infinity-Electronic.hk.
Azafady fofona sy jerena tsara ny fampahalalana momba ny faktiora, Infinity-Electronic.hk dia tsy handray andraikitra raha diso.
Fandoavam-bola manokana VAT dia halefa amin'ny fanehoan-kevitra aorian'ny fanamafisana ny sambo.
Azafady fenoy ny anaran'ny orinasa, ny adiresy, ny nomeraon-telefaona, ny laharam-pahefana, ny anaran'ny banky sy ny kaonty, ny fandefasana ny adiresy, mba hahafahan'ny mpampiasa mampiasa ny faktiora manokana manokana amin'ny ordinatera, fa ny fampahalalana feno dia tokony ho toy ny fandoavana hetra.
Ny anaran'ny orinasa dia tokony ho anaran'ny orinasa indostrialy sy ara-barotra.
Ny adiresin'ny orinasa sy ny laharan'ny finday dia tsy maintsy mitovy amin'ny fampahalalana momba ny orinasa.
Ny isa misy ny anaran'ny taxa dia ny isa ao amin'ny & lt; & lt; Tax Certificate registration certificate & gt; & gt ;, 15 isa matetika, azafady mandinika amim-pitandremana sy fampidirana.
Ny anaran'ny banky sy ny kaonty dia tsy maintsy soratana, ho an'ny roa amin'izy ireo.
Raha manoratra faktiora manokana momba ny faktiora manokana ny mpampiasa, dia averina avy amin'ny Infinity-Electronic.hk ny faktiora VAT automatique, ary tsy misy fiverenana.
Infinity-Electronic.hk dia tsy hanaiky ny fangatahana faktiora manokana momba ny famerenana VAT indray, raha efa navoaka ny faktiora araka ny fampahalalana avy amin'ny mpampiasa.
5, fampahatsiahivana mahatsikaiky
Raha toa ianao ka misalasala momba ny faktiora navoaka, azafady mba mifandraisa amin'ny Infinity-Electronic.hk ara-bola.
Raha tsy mandray ny faktiora ianao ao anatin'ny 30 andro aorian'ny fananana entana, dia mifandraisa amin'ny serivisy mpanjifa Infinity-Electronic.hk. Tsy hamoaka fanindroany fanindroany izahay raha tsy afaka mifandray aminay 90 andro (hatramin'ny daty)
Ny anaran'ny vokatra ao amin'ny faktiora dia hanoratra Electronic Components, ny laharana dia hanoratra ho filaminana marina, tsy misy fangatahana manokana hafa.
6, famerenana ny famerenana
Azafady azafady mifandraisa amin'ny serivisy mpanjifa raha toa ka tsy marina ny fampahalalana ny kaonty, araka ny baiko, Infinity-Electronic.hk dia hisolo toerana sy handefa azy ireo araka ny tokony ho izy.
Azafady mba mifandraisa amin'ny tolotra mpanjifa raha te hanova ny faktiora vaovao ianao, alefaso ny faktiora novolavolaina amin'ny adiresy nomena anareo aorian'ny fanamafisana ny fifehezana ara-bola anay.
Raha tsy misy ny fahazoan-dàlan'ny mpanjifa, ny sampandraharaha ara-bola dia tsy manaiky ny fangatahana fanakalozana vola avy amin'ny finday, fax, mailaka.